Bahamas Vanogadza I. Chester Cooper segurukota idzva rezveKushanya
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Bahamas Kuputsa Nhau » Bahamas Vanogadza I. Chester Cooper segurukota idzva rezveKushanya
Bahamas Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • vanhu • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Nyowani Bahamas Gurukota rezveKushanya neAviation
Vatungamiriri nevashandi veBahamas Ministry of Tourism & Aviation vanogamuchira nemufaro kune Mutevedzeri weGurukota, Anokudzwa I. Chester Cooper, akagadzwa kuve Gurukota rezveKushanya, Investment neAviation munaGunyana 17, rimwe zuva mushure mesarudzo dzeNyika. Kusarudzwa kwedare reDPM Cooper kwaive pakati pemapotifolosi ekutanga akapihwa nehutungamiriri hutsva hweProgressive Liberal Party, vakatakura kukunda pasarudzo musi waGunyana 16, 2021.
Mamiriro ezvinhu epasirese ebhizinesi akakosha zvakanyanya mukuwedzera kwakasimba kwezvikamu zveBahamas 'Tourism, Aviation uye Investment.
Minister Cooper simba uye rakapinza bhizimusi hunyanzvi ndizvo chaizvo zvinodiwa sezvo Ministry ichienderera mberi nechinangwa chekushanya kwekushanya.
Mr. Cooper vanotora chigaro nekuziva zvakanyanya nezve basa rakakura riri pamberi.
Tourism Director General Joy Jibrilu vakati: "Isu paMinistry of Tourism tinotarisira nemufaro kushanda pasi pehutungamiriri hutsva hwaMinister Cooper, uyo achaunzira kuHurumende yedu hupfumi hwezivo neruzivo zvaakawana kubva pahupenyu hwake hwese seakabudirira mutungamiri mumasangano akazvimirira. "Gurukota rine simba uye hunyanzvi hwebhizinesi ndizvo chaizvo zvinodiwa sezvo Bazi redu richienderera mberi nechinangwa chekugadzirisa kushanya pakati pehosha iri kuramba ichiitika."
Minister Cooper vanobvuma kuti rese bhizimusi repakati mukati The Bahamas inotungamirwa nenharaunda dzenyika dzese uye kuti kunzwisiswa kwenzvimbo dzepasi rose dzebhizinesi kwakakosha kwazvo mukuwedzera kwekuenderera kweBahamas 'Tourism, Aviation uye Investments zvikamu. Semunhu akawana budiriro yakawanda muhutungamiriri hwemasangano akazvimirira, VaCooper vanotora chigaro chebhizimusi rekutanga renyika iyi nekuziva zvakanyanya nezve basa rakakura riri pamberi. Anonakidzwa nemukana wekumukira kuchinetso mukushandira nyika yake yaanoda.
Gurukota Cooper ndiye mudiki pane gumi nevaviri uye akaroora Cecelia Cooper. Ivo vabereki vanozvikudza vevana vatatu.
Kurwira kwake kwekutanga kwakamusundidzira kuti ave neushingi, asimbe uye azvininipise; hunhu hwaimushandira zvakanaka paakakwira manera emakambani kuva Sachigaro & CEO weBAF Global Group uye Mutungamiri & CEO weBAF Financial & Insurance (Bahamas) Ltd.
Aive Sachigaro wekutanga weInishuwarenzi Advisory Committee uye Mutungamiriri wekutanga weBahamas Venture Fund. Iye inhengo yeYoung Presidents Organisation (YPO), Akakurumbira Toastmaster uye anoshanda pamabhodhi akasiyana siyana akazvimirira.
Mutevedzeri weGurukota Chester Cooper ndiye Mutevedzeri weMutungamiri weProgressive Liberal Party (PLP) uye nhengo yeParamende yedunhu reExumas neRagged Island.